snow December 6, 2012 - 6:13 pm သမ္မတကြီးအနေနဲ့ဝင်ဖြေရှင်းပေးသင့်တယ်..
Reply swe htwe December 7, 2012 - 12:43 am That’s right. But we believe in President,Hluttaw chairprsons,Daw Su and civil societies. They can solve this problem.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 7, 2012 - 3:25 am snow ပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ဒေသခံတွေနဲ့ သံဃာတော်တွေ သပိတ်စခန်းဖွင့် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာက ကိုယ့်တိုင်းပြည် အမိမြေရဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ ထိခိုက်လာတာတွေ၊ မြေသိမ်းမှုတွေမှာ သူတို့ မတရား ပြုကျင့်ခံရတယ် ထင်လို့ ဂရုပြုပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရက ကူညီနိုင်မလား လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ နိုင်ငံမှာ သမတဆိုတာ တကယ်တော့ အိမ်တအိမ်က အိမ်ထောင်ဦးစီးလိုပဲ။ ဦးစီးသူက ၀င်ပြီး မျှတအောင် ဆုံးမပေးတာ၊ ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်လိုမှားသွားတယ် မသိခင်မှာလဲ လောလောဆယ် မျက်မြင် ခံလိုက်ရသူတွေကို အားပေးမှု၊ ဂရုပြုမှုတွေ ပြသင့်ပါတယ်။ ဥပမာဆိုရင် တခြားနိုင်ငံတွေမှာသာဆို အကြီးအကဲတွေ သည်လိုနေရာ ရောက်သွားပြီ။ ဒါမှ လူထုအားပေးမှု ထောက်ခံမှုတွေ ရနိုင်မှာလေ။
Replyုkopouk December 6, 2012 - 8:43 pm ယနေ့ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ၇ှင်းလင်းပွဲမှာ အမေစု ကိုယ်တိုင် သံဃာတော်များ ဒဏ်၇ာ၇၇ှိမှုများ ကို ပြည်ပက ပညာ၇ှင်များနဲ့ စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်သွားမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်.ယခုထိုင်သပိတ်ဆင်နွဲနေသော သံဃာ တော် များအနေနဲ့ ပခုက္ကူ နှင့် မုံ၇ွာက သံဃာတော်များကဲ့သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးေ၇း ကော်မ ၇ှင်၏ အစီ၇င်ခံစာ အပေါ် သုံးသပ်ပြီးမှ သပိတ် ဆင်နွဲသင့်သည်လို့ ထင်မြင်မိပါသည်.
Reply pps12345 December 6, 2012 - 8:54 pm ကိုအောင်မင်းက တော်ပါပေတယ်။ သမ္မတကြီးကို ထပ်ညာဖို့ ဝ တွေနှင့် ရှမ်းတွေကို ရန် ထပ်တိုက်ပေးတော့ မယ်ထင်ပါတယ်။
Reply myat December 6, 2012 - 11:03 pm မြန်မာပြည်က သံဃာတော်တွေ ၀ိနည်း တစ်ခုတိုးရတော့မယ် သံဃာတော်တိုင်းဆန္ဒပြတတ်ရမည်လို့
Reply ကိုကြီး December 9, 2012 - 12:20 pm ဆန္ဒပြခြင်းသည်ဝိနည်းတော်နှင့်ညီပါသည်။ဘုရားရှင်သည်သာသနာကိုရန်ပြုလိုသူများမှကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါကဆန္ဒပြနိုင်ရန် ကံဆောင်ခြင်းအဖြစ်ပညတ်ထားပါသည်။ယခုဖြစ်ရပ်ဍ်သံဃာသည်အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ပြည်သူဘက်မှဝင်ရောက်ရပ်တည်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ပုဂ္ဂလိကအကျိုးခံစားခွင်.အနေဖြင့်ဘာမှမရှိတာသိနိုင်ပါသည်။ကိုယ်တိုင်ဖြိုခွင်းသောတပ်ဖွဲ့ များမှာလည်းငရဲကြီးခြင်း ၀ဋ်လိုက်ခြင်း သံသရာပါခြင်း မဂ်လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းသာခံစားကြရမည်။အကျိူးအမြတ်ကတော့၎င်းတို့ ကာကွယ်ပေးနေသောလူတစုနဲ့ တရုတ်သာခံစားရမည်ဲဖြစ်သည်။ပြည်သူထိတော့သံဃာမနေသာ သံဃာထိတော့ပြည်သူဝင်ပါမှသာ ။ပြည်သူထိလဲသံဃာမပါ သံဃာထိလဲပြည်သူအနေသာသီးခြားဆီရပ်တည်ပါကနာစရာရှိရင်ပိုနာဖို့ ပဲရှိပါသည်။သင့်မိသားစု သင့်အသိုင်းအ၀ိုင်း သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တခုခုဖြစ်ပါကလဲကှ်ျသို့ အကျိုးစွန့်ကာကွယ်ပေးမည့်သူများလိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားစေလိုပါသည်။
Reply Aung Khin December 7, 2012 - 12:06 am A lot of demandings are complicated and
Reply mm December 7, 2012 - 5:08 am သံဃာတော်တွေလဲ တရားအားထုတ်ကြပါဦး ထစ်ခနဲဆို ဆန္ဒပြ နဲ့ ဦးသန်းရွှေအကွက်ထဲ ဝင်နေကြပါလား
Reply Nyein December 7, 2012 - 7:38 am After this time, we no need to ask the sympathy. We shall react eye for eye, fire with fire.
Reply david December 7, 2012 - 10:00 am ဒီ အချက်က နိုင်ငံတော် အစိုးရကို စိန်ခေါ်သလိုဖြစ်နေတယ် အခက်အခဲအများကြီးကြုံတွေနိုင်
Reply Yin Yin Moe December 7, 2012 - 10:03 am အရှင်ဘုရားတို့ဘုရား….
Reply david December 7, 2012 - 10:05 am သမတကြီးကလုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်လိုဆိုတော့ အခုဟာက OIC မဟုတ်ဘူးလေ အခုဟာက ၀ တို.ရဲ. ၀မ်းပေါင်း ဖြစ်နေတာကိုသတိထားဘို.လိုပါတယ်။
Reply david December 7, 2012 - 10:13 am တရားဥပဒေ ဆိုတာလည်းရှိသေတယ် တရားဥပဒေအတိုင်းမလုပ်ရင် အရေးယူမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တရားဥပဒေ စိုးမိုမှု နဲ.ပတ်သက်ပြီး တော်တော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရ
Reply kyawkyawlwin December 7, 2012 - 12:40 pm သမတကြီး တောင်းပန်တာရော အရေးယူတာရော ပြန်ပြင်ဆင်ဖို့တွေပါ လုပ်ရမှပါ
Reply Chit Chit December 7, 2012 - 4:43 pm အားလုံးကိုဖွင့်ဟစေချင်တယ်။ နောက်ပြီး သမ္မတကြီးအရမ်းပင်ပန်းနေပြီးဆိုတာလည်းသိပါ တယ်။ ဒါပေ့မယ် တတ်လှမ်းနေကျလှေကားတစ်ခုလို သတ်မှတ်ပြီး ကြိုးစားပေးပါအုံး။ ဘာ အကြောင်းကိုမှ ပြန်လှည့်မကြည့်ဘဲ သမ္မတကြီးရုန်းထွက်နေတယ်လို ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေကို အားကိုးလို၇ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ ဘာအကြောင်းကြောင့်မှ အရှုံး မပေးပါနဲ့။ မိဘတိုင်းဟာ သားသမီးတိုင်းအတွက် ပူပင်ရစမြဲပါ။ သမ္မတကြီး ကျန်းမာပါစေ။ အမေစုလည်း ကျန်းမာပါစေဆိုတာကတော့ ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်စေချင်ဆုံးဆုတစ်ခုပါ။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံသားတွေက မရင်းနှီးဘူးသေးတဲ့ အပြောင်းအလဲကြောင့် အခွင့်အရေးအများ ကြီး ယူသလိုဖြစ်သွားခဲ့ရင် လည်းသည်းခံ ပေးစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ပြဿနာတိုင်းမှာ အဖြေရှိပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကိုသာရှာဖွေဖြတ်တောက် ဖို့လိုပါတယ်။ လုပ်ကြံမှုတွေဖြစ်နိုင်သလို ကြိုးကိုင်မှုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အကောက်ကြံမှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဓါတ်မကျဘဲ ကြိုးစားပေးစေချင်ပါတယ်။
Reply swe htwe December 7, 2012 - 7:07 pm That’s right.
Reply Aung Khin December 7, 2012 - 4:22 pm We should be patient until the result of comission.
Reply Law and Justice December 7, 2012 - 11:46 pm Dictator’s son becomes dictators .
Reply k.soe2012 December 8, 2012 - 9:35 pm ဒေ၀ဒတ် လည်းမြေမြို ခါနီး တော့ ဘုရားကို တောင်းပန် ရှိခိုးကန်တော့ရှာပါတယ်။
Reply မင်းကြီးညို December 10, 2012 - 10:33 pm နတ်စင်တရာဆရာတော်ကြီးက နောက်ထပ်သွေးထွက်သံယိုတခုဖြစ်ရန် ရှိသေးကြောင်း